एक रत्न फिर्ता गर्न आवश्यक छ? gem.agency सजिलो बनाउँछ।
हामी सबै भन्दा माथि ग्राहकको सन्तुष्टि को लागी प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईंको रत्न (हरू) प्राप्त गरेको days० दिन भित्रमा तपाईं आफ्नो अर्डरसँग असन्तुष्ट हुनुभयो भने, तपाईं हामीलाई यो मूल र अव्यवस्थित अवस्थामा फर्काउन सक्नुहुन्छ। यस day० दिन निरीक्षण अवधिको समयमा रत्नहरू मात्र फर्काउन सकिन्छ।
कृपया A का लागि GEMIC ईमेल गर्नुहोस् Rईटर्न Aप्रमाणीकरण Nअम्बर (RAN) र अतिरिक्त रिटर्न निर्देशनहरू।
NB: हामीलाई RAN बिना फर्काइएको अर्डरहरू अस्वीकृत हुनेछ र प्रेषकलाई फिर्ता हुनेछ। रिटर्न प्याकेजि shipping र शिपिंग शुल्कहरू प्रेषकको उत्तरदायित्व हो। सबै बिक्रीहरू 30 दिन पछि अन्तिम छन् (फर्केका वस्तुहरू अर्डर प्राप्त हुने मितिको 30 दिन भित्र पोष्टमार्क हुनुपर्दछ)।
कृपया हुलाक वितरण इन्कार नगर्नुहोस्, के तपाईं अर्डर रद्द गर्न चाहानुहुन्छ यो पठाइसकेपछि, तर यो डेलिभर हुनु अघि। यदि आदेश अस्वीकृत गरियो भने, ग्राहक हरायो भने आइटमको पूरा मूल्य र यसको फिर्ताको लागि खर्च हुने सबै दलाली शुल्क र कर्तव्यको लागि उत्तरदायी हुनेछ।
धेरै देशहरूमा, घोषित लदानहरू लागू हुने भन्सार शुल्क र करको विषय हुन सक्छ। खरीददारहरू कुनै पनि भन्सार, कर र कर्तव्यहरू तिर्ने जिम्मेवार छन्। माथि उल्लेखितको कारणले फर्काउने अधिकार आधिकारिक हुन सक्दैन।
** सबै फिर्ती रकम एकै तरीकाले भुक्तानी प्राप्त गरेको माध्यम बाट गरिन्छ। शिपिंग, बीमा र क्रेडिट कार्ड प्रक्रिया लागत गैर-फिर्तीयोग्य हो। त्यहाँ कुनै पुनः शुल्क शुल्क छैन। प्रतिस्थापन प्रस्ताव गरिएको छैन।
थप प्रश्नहरू? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
GEMIC हाम्रो ग्राहकहरूको सुरक्षा र सुरक्षाको बारेमा चिन्तित छ। हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि हाम्रो लेनदेन प्रक्रिया एकदम सुरक्षित छ र हाम्रो ग्राहकको जानकारी सुरक्षित छ।
सबै भुक्तान र क्रेडिट कार्ड जानकारी पेपैल द्वारा एक सुरक्षित पृष्ठ मा ह्यान्डल गरिएको छ। हामीसँग तपाईंको क्रेडिट कार्ड वा वित्तीय जानकारीमा पहुँच छैन। PayPal सुरक्षा जानकारी
GEMIC प्रयोगशालाले यसको वेबसाइटमा व्यक्तिगत जानकारीको सम्मान गर्दछ। तपाईंको ईमेल ठेगाना अस्थायी रूपमा ईमेल वा अर्डर उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हामी तपाईको इ-मेल ठेगाना, ब्राउजि patterns पैटर्न, वा कुनै अन्य जानकारी कहिले पनि बेच्ने छैनौं।
GEMIC ले तपाइँको भ्रमण बढाउन र हाम्रो अनलाइन शपिंग कार्ट सक्षम गर्न ब्राउजर कुकीहरू प्रयोग गर्दछ। कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी कुकीजमा भण्डार गरिएको छैन। कुकीज हाम्रो साइट को सबै सुविधाहरु को उपयोग गर्न सक्षम हुनु पर्छ।
अधिक प्रश्नहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्.
तपाईं प्रमाणपत्र अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं आफ्नो कार्टमा वस्तु थप्नुहुन्छ। यो गर्नका लागि लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् "यस वस्तुको लागि रत्न प्रमाणपत्र थप्नुहोस्" माथिको बस्तु पृष्ठमा "भाडोमा हाल" टांक। यसले प्रमाणपत्र विकल्पहरू खोल्छ।
सबै वस्तुहरूको ग्यारेन्टी गरिएको छ GEMIC मा। हामी सुनिश्चित गर्दछौं कि तपाईले जहिले पनि तपाईले तिर्नु पर्ने कुरा पाउनुहुन्छ।
GEMIC मा सबै रत्नहरु उल्लेख गरिएको हुनुको ग्यारेन्टी हुन्छ। हाम्रो विशेषज्ञ स्टाफ सावधानीपूर्वक निरीक्षण र प्रत्येक रत्न मापन।
GEMIC बाट प्रत्येक रत्न पृथ्वी द्वारा बनाईएको एक प्राकृतिक रत्न हो। हामी सिंथेटिक वा ल्याब-निर्मित "रत्न" मा सम्झौता गर्दैनौं।
तपाइँ के हेर्नुहुन्छ, तपाइँ के पाउनुहुन्छ
प्रत्येक रत्न फोटो वास्तविक रत्नको हो तपाईंले प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामी स्टक फोटोग्राफर वा समान फोटोहरू विभिन्न पत्थरहरूको लागि प्रयोग गर्दैनौं।
माथिका सबै पोइन्टहरू हाम्रो 100% पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी द्वारा समर्थित छन्। हामी हाम्रो रत्नहरूको साथ खडा हुन्छौं, किनकि हाम्रा ग्राहकहरू हामीसामु उभिन्छन्।
भुक्तानी विकल्प र नीतिहरू
चेक आउट आउट सुरक्षित, सुरक्षित र GEMIC प्रयोगशालाको साथ सजिलो छ।
हामी तपाईंको अर्डर पूरा गर्नको लागि निम्न लचिलो भुक्तान विधिहरू प्रदान गर्दछौं।
PayPal मार्फत क्रेडिट कार्डबाट भुक्तान गर्नुहोस् (कुनै PayPal खाता आवश्यक छैन)
PayPal भिसा, भिसा डेल्टा, भिसा इलेक्ट्रोन, मास्टरकार्ड, यूरोकार्ड, मास्ट्रो र अमेरिकन एक्सप्रेस स्वीकार गर्दछ। PayPal सुरक्षा जानकारी.
तपाईंको PayPal खातासँग भुक्तान गर्नुहोस्
हामी एक प्रमाणित पेपैल सदस्य भएका छौं।
नोट: यदि तपाईंसँग खाता छैन भने, तपाईं सजिलैसँग अन-स्क्रिन निर्देशनहरू अनुसरण गरेर नयाँ खाता खोल्न सक्नुहुन्छ।
वेस्टर्न यूनियन ट्रान्सफर द्वारा भुक्तान गर्नुहोस्
जब वेस्टर्न युनियन ट्रान्सफर द्वारा भुक्तानी गर्दा, तपाइँको वस्तुहरू तीन दिनको लागि आरक्षित हुनेछ। कृपया हामीलाई तपाईंको स्थानान्तरणको लागि अद्वितीय पैसा लेनदेन नम्बर (MTN #) ईमेल गर्नुहोस्। एक पटक कोषहरू प्राप्त भएपछि, हामी तपाईंको अर्डर प्रक्रिया गर्नेछौं।
नोट: हस्तान्तरण शुल्क प्राप्त रकमबाट घटाउनु हुँदैन।
प्रत्यक्ष बैंक स्थानान्तरण मार्फत भुक्तान गर्नुहोस्
प्रत्यक्ष बैंक स्थानान्तरण द्वारा भुक्तान गर्दा, तपाइँको वस्तुहरू तीन दिनको लागि आरक्षित हुनेछ। कृपया हामीलाई एकचोटि ईमेल हस्तान्तरण गर्नुहोस् बैंक स्थानान्तरण सन्दर्भ कोड जब तपाईंले भुक्तानी शुरू गर्नुभयो। एक पटक कोषहरू प्राप्त भएपछि, हामी तपाईंको अर्डर प्रक्रिया गर्नेछौं।
एकचोटि तपाईं चेक आउट गर्न तयार हुनुहुन्छ:
तपाईंको शपिंग कार्ट समीक्षा गर्नुहोस् र तपाईंको शिपिंग विधि चयन गर्नुहोस्। हामी निम्न दुई शिपिंग विधि र दरहरू प्रदान गर्दछौं; FedEx (--3 दिन)
मानक विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय एयरमेल (१०-२१ दिन)
"जारी राख्नुहोस् चेकआउट" क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको शिपिंग ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
तपाईंको भुक्तानी विधि छनौट गर्नुहोस् र "अब भुक्तानी गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको बिलि information जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्, वा पैसा स्थान्तरणको लागि स्क्रिन निर्देशनहरू प्रिन्ट गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईंको अर्डर सफलतापूर्वक राखिएको छ, तपाईं हामी बाट एक ईमेल पुष्टिकरण प्राप्त गर्नुहुनेछ तपाईंको ईमेल ठेगानामा।
नोट: तपाईले हाम्रो शिपिंग र अर्डर कन्फर्मेसन ईमेलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्न तपाईको इ-मेल ठेगाना थप्नको लागि निश्चित हुनुहोस्। यदि तपाईं हामीबाट कुनै ईमेल प्राप्त गर्नुहुन्न भने कृपया तपाईंको स्प्याम वा जंक ईमेल फोल्डर जाँच गर्नुहोस्।
क्रेडिट कार्ड र PayPal भुक्तानी कुनै पनि मुद्रा मा शुल्क लाग्नेछ। वेस्टर्न यूनियन मार्फत भुक्तानी वा बैंक स्थानान्तरण द्वारा अमेरिकी डलरमा पठाउनु पर्छ।
अमेरिकी डलर बाहेक कुनै मुद्रा चयन गर्दा, वर्तमान दिनको लागि विनिमय दर देखाइएको मूल्यहरु रूपान्तरण गर्न प्रयोग हुनेछ।
PayPal र तपाइँको प्रसंस्करण बैंक (क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने बैंक) ले मुद्रालाई रूपान्तरण गर्न आफ्नै विनिमय दरहरू प्रयोग गर्दछ, त्यसकारण, तपाइँको चयनित मुद्रामा शुल्कहरू हाम्रो वेबसाइटको मुद्रामा देखाइएको मूल्य भन्दा थोरै फरक हुनेछ।
GEMIC ले देखाईएको रकम मात्र चार्ज गर्नेछ। कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरू केवल पेपैलमा आधारित छन्, तपाईंको क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने बैंकको वा वेस्टर्न युनियनका नीतिहरू।
हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गर्नका लागि तपाईसँग "कुकीज" र "जाभास्क्रिप्ट" सक्षम हुनु पर्दछ तपाईको वेब ब्राउजर सेटिंग्समा। यदि तपाईंले आफ्नो शपिंग कार्टमा एक वस्तु राख्नुभएको छ, तर यो वस्तु चेक आउटमा देखाईएको छैन भने यसले यो संकेत गर्दछ कि तपाईंसँग "कुकीहरू" सक्षम छैन।
यदि तपाईंलाई भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको छ वा अन्य भुक्तानी विकल्पहरू छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
एक्सप्रेस लदान सामान्यतया डेलिभरीको लागि days- days दिन लाग्छ र बाटोको हरेक चरणमा अनलाइन ट्र्याक गर्न सकिन्छ। पार्सल पूर्ण बीमा छन्। एक हस्ताक्षर वितरण मा आवश्यक छ। अधिकांश देशहरूको लागि सोमबारदेखि शुक्रवार छुट्टिनेछ। कुनै PO बक्सहरू (युएई, साउदी अरेबिया र कुवेत बाहेक), APO वा FPO ठेगानाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नोट: यदि तपाईंसँग 'फाईलमा हस्ताक्षर' छ भने, कृपया यो प्राधिकरण रद्द गर्न EMS कल गर्नुहोस्। प्याकेजहरू जुन हस्ताक्षर बिना डेलिभर गरिन्छ, 'फाईलमा हस्ताक्षर' को कारणले गर्दा हाम्रो बीमा क्यारियरले कभर गर्न सक्दैन।
'उपलब्ध' को रूपमा देखाइएका सबै रत्नहरू स्टकमा छन् र तत्काल शिपिंगको लागि तयार छन्। अर्डरहरू १ कामका दिन भित्र प्रक्रिया गरिन्छ - सोमबार - शुक्रवार (बिदा बाहेक)
धेरै देशहरूमा ठीक ढ declared्गले घोषित लदानहरू भन्सार शुल्क र करको अधीनमा हुन्छन्। रेजिष्टर्ड मेल लामो लिन्छ, तर सामान्यतया थप शुल्क बेवास्ता गर्दछ। हामी गिफ्टको रूपमा पठाउँदा खुसी छौं, तर कृपया नोट गर्नुहोस् कि हामीसँग तपाईंको देशमा हुन सक्ने अतिरिक्त शुल्कमा कुनै नियन्त्रण छैन।
GEMIC बाट सबै प्याकेजहरू पूरा इनभ्वाइस समावेश गर्दछ। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस तपाईंको अर्डर राख्दै अघि तपाईं एक अनुकूलित चलानी वा सबै कुनै चलानी आवश्यक भएमा।
GEIC ले निम्नलिखित स्पष्टता स्केल प्रयोग गर्दछ जब रत्नको ग्रेडिंग:
IF : लुप सफा - आन्तरिक निर्दोष; समावेशीबाट मुक्त।
वीवीएस : लगभग loupe सफा - धेरै, धेरै हल्का समावेशहरू; समावेशीहरू मुश्किलले १०x म्याग्निफिकेसन अन्तर्गत देखियो।
VS : आँखा सफा - धेरै हल्का समावेशहरू; हल्का समावेशहरू प्रशिक्षित आँखाद्वारा वा १०x म्याग्निफिकेसन अन्तर्गत देख्न सकिन्छ।
SI : थोरै समावेश - सानो समावेशी नग्न आँखा संग देख्न सकिन्छ।
I : समावेश - समावेश नग्न आँखा संग देख्न सकिन्छ।